site ha na 20-09-08
Ọrụ anaghị akwụsị naanị n'ihi na ọnọdụ okpomọkụ na-ada, mana enweghị ezigbo aka aka, ọ ga-abụ ihe na-egbu mgbu nke ukwuu iji mezue ọrụ ahụ n'oge oyi. Ekele maka mkpuchi ihe, ihe mkpuchi mmiri na ike mgbanwe dị ukwuu na uwe ọrụ kachasị mma, akụrụngwa oyi na mkpịsị aka siri ike agaghị ...
Ọ bụrụ n ’ibi na ihu igwe oyi, ịrụ ụka adịghị ya na agwa ma ọ bụ okpu a kpara akpa bụ akụkụ bụ isi nke akwa uwe oyi gị. Mana ma ị chọrọ iyi okpu ọkụ ma ọ bụ tinye echiche nke ejiji, afọ a (yana afọ ole na ole gara aga) yiri ka ọ na-eyi okpu. Carhartt nwoke Acrylic Watch Cap bụ ...
Ndị na-eme nchọpụta na Mahadum Harvard achọpụtala na ndị nwere ihe ịga nke ọma na-egosipụtakarị ọchịchọ ịgbaso ọdịnala. Dịka ọmụmaatụ, n'ụwa nke ahịa siri ike, ndị mmadụ na-eyi sọks na-enwu gbaa. Ọmụmụ ihe a kpọrọ "Red Sneaker Effect" na-enyocha mmeghachi omume ndị mmadụ n'ihe na-adịghị mma p ...